दिपेन्द्र रोक्का - | Nagarik News - Nepal Republic Media
दिपेन्द्र रोक्काका लेखहरु :
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा नेपालले माल्दिभ्सलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको छ।
दिपेन्द्र रोक्का २१ मंसिर २०७६ शनिबार २ मिनेट पाठ
गौरिकाले तोडिन आफ्नै रेकर्ड (फोटो फिचर)
गौरिकाले बिहीबारको प्रतिस्पर्धामा ० दशमलव १३ मिलि सेकेन्ड समय सुधार गरेकी हुन्।
दिपेन्द्र रोक्का १९ मंसिर २०७६ बिहीबार १ मिनेट पाठ
१३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) अन्तरगत पुरुष फुटलबलमा नेपाल र श्रीलंकाको खेल बराबरी भएको छ।
दिपेन्द्र रोक्का १८ मंसिर २०७६ बुधबार १ मिनेट पाठ
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण गरेर आज फर्किएका छन्। एयर चाइनको विमानबाट शनिवार साँझ ५ बजे काठमाडौं अवतरण गरेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले काठमाडौंमा करिब २१ घण्टा बिताएका थिए।
दिपेन्द्र रोक्का २६ आश्विन २०७६ आइतबार ४ मिनेट पाठ
गरे के हुदैन र ?
छोटो समयमै काठमाडौंका सडकको रुपनै फेरिएको छ। रातारात सडक मर्मत गरेर सफा सुग्घर बनाइएको छ। अघिपछि धुलो,धुवा र फोहोर हुने सडकहरु सफा सुग्घर र चिल्ला देखिएका छन्।
दिपेन्द्र रोक्का २४ आश्विन २०७६ शुक्रबार ४ मिनेट पाठ
शुभफल प्रदान गर्ने देवताकारुपमा चिनिने भगवान गणेशको पूजा आरधाना गर्दै गणेश चतुर्थी मनाउने चलन छ।
दिपेन्द्र रोक्का १७ भाद्र २०७६ मंगलबार १ मिनेट पाठ
आज बिहानैदेखि जनैपूर्णिमा दिन हिन्दू धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षासूत्र (डोरो) र गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको जनै लगाउने चलन छ। तराइ तिर आजका दिनमा रक्षाबन्धन पनि भन्छन्। रक्षासूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ।
दिपेन्द्र रोक्का ३० श्रावण २०७६ बिहीबार ४ मिनेट पाठ
दिपेन्द्र रोक्का २३ श्रावण २०७६ बिहीबार ५ मिनेट पाठ
नेपालमा पाइने पाटे बाघबारे केही जानकारी
नेपाल र भारतकाे भुभागमा पाटेबाघहरू पाइन्छ। पाटेबाघकाे वैज्ञानिक नाम प्याथरा टाइग्रिस टाइग्रिस हाे। वर्तमान अवस्थामा बाघका ६ प्रजातिहरू मात्र अस्तित्वमा छन्।
दिपेन्द्र रोक्का १३ श्रावण २०७६ सोमबार ५ मिनेट पाठ
‘जुजु धौ’ अर्थात् दहीको राजा
भक्तपुरको बोलाछेँ बस्ने म्रीगेन्द्र प्रधानङ्य ४५ वर्षदेखि ‘जुजु धौ’ व्यवसायमा आवद्ध छन् । उनको बुबाले सुरु गरेको भक्तपुर स्पेशल दही भण्डार भक्तपुरकै पुरानो दही पसल मध्येको एक हो । प्रधानङ्यको दैनिकी बिहान ६ बजेबाट सुरु हुन्छ । दही बनाउन चाहिने दूध बिहानै आइपुग्छ ।
दिपेन्द्र रोक्का १० श्रावण २०७६ शुक्रबार ५ मिनेट पाठ
सूर्यमानका एक हजार पूर्णचन्द्र (भिडियो)
नेवा: समुदायले मनाउने विभिन्न पर्व मध्येको एक हो ‘जंकु’। ‘जंकु’ भन्नाले मानिसले आयुमा निश्चित अवधि पार गरेपछि मनाइने खुशियाली हो। नेवारी समुदायले बच्चा हुँदा गरिने ‘पास्नी र भात खुवाइलाई’ जन्कुको संज्ञामा राखे पनि ५ वटालाई विषेश महत्व दिने गर्दछन्।
दिपेन्द्र रोक्का ३ श्रावण २०७६ शुक्रबार ४ मिनेट पाठ
सिंहदरबारकाे पर्खाल भत्किएपछि... (फोटो फिचर)
लगातारको वर्षाले देशभर बाढीपहिरोका घटना बाहिर आइरहेको छ। यस्तोमा काठमाडौंमा सिंहदरबारको पर्खाल लडेको छ। आज सिंहदरबारको पूर्वी ढोका(अनामनगर) तर्फको पर्खाल लडदा सवारी आवागमनमा समस्या गराएको हो।
दिपेन्द्र रोक्का २७ असार २०७६ शुक्रबार १ मिनेट पाठ
माटोका भाँडालाई ४८ वर्ष...
माटाका भाँडाप्रति मानिसहरुको आकर्षण अहिले पनि उत्तिकै छ। तर उस्तै देखिने हलुका तथा सस्तो मूल्यका कारण प्लास्टिकका भाँडाका कारण माटाका भाँडाको अस्तित्वमा संकट पनि उत्तिकै देखिन्छ। भक्तपुरको ठिमी शहर, यस्तो शहर हो, जहाँ प्रजापती समुदायले प्राचिनकालदेखि नै माटाका भाँडाकुडा बनाउने गर्दथे।
दिपेन्द्र रोक्का २७ असार २०७६ शुक्रबार ४ मिनेट पाठ
एक पटक कल्पना गर्नुस् न! तपाईले सोचेको सहर कस्तो हुनुपर्ला ? ‘एकदम व्यवस्थीत, सफाचट, सवै अत्यावस्यक सामाग्रिको व्यवस्था भएको’, सामान्यतय हामीले सोच्ने सहरको कल्पना यस्तै हो। तर वास्ताविकता त्यसको थोरै पनि अनुभुत गर्न नसकिने अवस्था छ।
दिपेन्द्र रोक्का १८ असार २०७६ बुधबार २ मिनेट पाठ
नेपाली समाजमा असार १५ को विशेष महत्व छ। असार १५ लाई किसानहरुको दिनकोरुपमा लिने गरिन्छ। 'मानो छरेर मुरी उव्जाउने' दिनको रुपमा लिइन्छ।
दिपेन्द्र रोक्का १५ असार २०७६ आइतबार २ मिनेट पाठ
दिपेन्द्र रोक्काका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्